लक्ष्मीको हत्या की आत्महत्या ? चारदिन वित्दा अझै फेला परेन रहस्य !
शंकास्पद मृत्यु भएको लक्ष्मीको हत्या भएको हो की आत्महत्या अझैसम्म फेला परेका छैनन् । वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर ३, प्रगतिनगरकी २३ वर्षीया लक्ष्मी ठाकुर (रेश्मा) आईतबार दिउँसो घरबाट मःम खान निस्केकी उनी राती ८ बजे अस्पतालको बेडमा छटपटाईरहेको अवस्थामा फेला परेकी थिईन् ।
घरमा मःम खान जादैँछु भन्दै निस्केकी लक्ष्मी माईस्थान चोकमा रहेको हट मःम सेन्टरमा साथी सुरक्षा खतिवडा (जास्मीन)संग खाजा खाएकी थिईन् । साथी जास्मीनका अनुसार खाजा खाएरसंगै छुटेका थियौँ । प्रहरीका अनुसार केही बेरमै अर्का साथी अल्का कलवारलाई फोन गरेर आफुले विस सेवन गरेको बताएपछी घण्टाघर अगाडी उनलाई छटपटाईरहेको अवस्थामा उनलाई उद्धार गरी नारायणी अस्पताल पुगाएका थिए । किन र के कारणले उनि विष सेवन गरेको आफुहरुलाई थाहा नभएको जास्मीनको दाबी छ ।
यता परिवारजनले रेश्माले आत्महत्या नगरी उनको हत्या भएको आरोप लगाएका छन् । घटनामा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याई सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनीहरुले माग राख्दै आएको छ ।
घटना भएका दिन रेश्माको मोबाइलबाट कल डिटेल्स मेटाइएको अवस्थामा फेला परेको उनको परिवारजनको भनाई छ । यससंगै उसले घरबाट निस्कँदा र अस्पतालमा भेटिएको लेगिज फरक पर्नु, सुरुवाल च्यातिएको, जीउमा धुलोमाटो लाग्नुजस्ता कारणले पनि घटना शंकास्पद भएको उनकी दिदी पिंकीको भनार्इ छ । नास्ता खाएर बिदा भएको साथी फेरि घण्टाघरमा रेश्माले विष सेवन गरेको छटपटाइरहको अवस्थामा अचानक भेटिनु, घटनापछि साथीहरु अस्पतालबाट भाग्नु र रेश्माको प्रेमी आनान्द गुप्ता सम्पर्क विहीन बन्नुले घटना रहस्यमय भएको उनको घरपरिवारका सदस्यको दाबी छ । तर प्रहरीका अनुसार उनका साथीहरु प्रहरीको निगरानीमा छन् । आनन्द गुप्ताको खोजी भईरहेको छ ।
यता चारदीन वितिशक्दा पनी अझै पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै घटनाको विस्तृत जानकारी हुने प्रहरीको भनाई रहेको छ ।
उनको फेसबुक प्रोफाईलमा समेत हेर्दा निकै लामो समयदेखी उनी प्रेम कै विषयलाई लिएर निकै निराशाका पोष्टहरु राखिएको देखिन्छ । कहिले विछोडका कुरा त कहिले आफु निकै टाडा गईदिने जस्ता कुराहरु पोस्ट गरिएको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरिक्षकका अनुसार अनुसन्धान यसतर्फ पनी केन्द्रित गरिएको हो । यता फरार रहेका आनन्द गुप्ताको पनी खोजी कार्य भईरहेको उनले बताए ।
बिहिवार, श्रावण १६, २०७६, ०७:०८:००